भरतपुरमा रेनु दाहाल लाई झड्का यस्तो आयो ताजा अपडेट ! - jagritikhabar.com
भरतपुरमा रेनु दाहाल लाई झड्का यस्तो आयो ताजा अपडेट !
निकै चासाेका साथ हेरिएकाे भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ । पछिल्लाे विवरण अनुसार मेयरमा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादीकी रेणु दाहालले अग्रता कायम गरेकी छन् । यद्यपी मतान्तर केही घटेको छ ।
हाल वडा नम्बर ११ को मतगणना भइरहँदा ९०८१ मत ५८०९ मत गणना भएको छ । जसमध्ये मेयरमा दाहालले २२४१ मत पाउँदा नेकपा (एमाले) का विजय सुवेदीले २१३१ मत पाएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ खतिवडाले ३७४ ल्याएका छन् ।
त्यस्तै, वडाध्यक्षमा एमालेका कमल मल्ल २४९९ मतसहित अग्रता लिइरहँदा माओवादीका युवराज पौडेलले १९२७ मत पाएका छन् । त्यसैगरी महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुला सदस्यहरु एमालेका उम्मेदवारहरुले नै अग्रता लिइरहेका छन् ।
पछिल्लो मत परिणामअनुसार दाहालले २० हजार ७ सय ३९ मत पाएकी छिन् । एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीको १७ हजार ४ सय ९९ मत छ । पछिल्लो मत परिणामअनुसार दाहाल सुवेदीभन्दा ३ हजार २ सय ४० मतले अगाडि छिन् ।
भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनकाे बागी उम्मेदवारका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले अहिलेसम्म ७ हजार ९ सय ५६ मत पाएका छन् । उनले पाउने मतले एमालेकाे हारजित निर्क्याेल हुने धेरैकाे विश्लेषण छ ।
धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार रामकुमार आचार्य विजयी भएका छन् । उनी १० हजार ३ सय ५५ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामप्रसाद विडारीले ८ हजार १ सय १६ मत प्राप्त गरे ।
आचार्यको यो दोस्रो कार्यकाल हो । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि अध्यक्षमा विजयी भएका थिए ।
गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार यन्त्रबहादुर थापा विजयी भएका छन् । उनी ९ हजार ४ सय ३१ मत ल्याई विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार अम्बिका रुपाखेतीले ९ हजार ९१ मत प्राप्त गरिन् ।
वैशाख ३० गते निर्वाचन भएका ६२८ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको मतपरिणाममध्ये सबभन्दा धेरै स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले २८० स्थानमा जित हात पारेको छ। नेपाली कांग्रेसले १०२ वटा नगरपालिकामा मेयर र १७८ गाउँपालिका अध्यक्षमा जित हात पारेको छ। त्यस्तै, नेकपा एमालेले १७३ स्थानीय तह जितेको छ। एमालेले ५९ स्थानीय तहमा मेयर र ११५ गाउँपालिकामा अध्यक्ष जितेको छ।
त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म ११२ स्थानीय तहमा जित हात पारको छ। २० नगरपालिका र ९२ गाउँपालिकामा माओवादीले जितेको हो। त्यस्तै, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जनता समाजवादी पार्टीले १६ स्थानीय तह जितेको छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीले १२ वटा स्थानीय तहमा जितेको छ।
त्यस्तै अन्य दलहरूले ३५ वटा स्थानीय तह जितेका छन्।